Isikhathi sokufunda: 10 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 10/07/2020)
lwemali lokusebenzaSisanda wabhala ibhulogi ku Ukugibela nezingane esitimeleni ngakunika amanye amathiphu okugcina abantabakho ukuba nezivakashi. Ukufunda izincwadi, ukudlala Uno nokulalela audiobooks nakanjani kumelwe nakanjani umuntu, kepha kukhona amathoni wezinhlelo zokusebenza ongazilanda ngaphambi kokuphuma lapho esikholwa ukuthi ngeke zikujabulise kuphela kepha akusize wenze uhambo lwakho ihlelwe futhi kumnandi! Kusukela App Store ku-Google Play, sike babanjwa ezinye zezindawo ezingcono kakhulu 23 Izinhlelo ze You Need Download Ngaphambi Okuhambayo. Okudingayo smartphone futhi esikhathini esithile ngaphambi uhambo olulandelayo.
Noma ngabe lomthetho emzini oyivakashelayo noma cha, Airbnb kuyinto undabuzekwayo. Lena nakanjani omunye zokusebenza udinga ukuba thwebula phambi wokujikeleza. Okunikelwe lokusebenza kude amanani eshibhile, futhi nakho eyiqiniso ngaphezulu ngokuvumela abasebenzisi ukuhlala nge sendawo, noma elulwimini lwabo. Uhlelo lokusebenza inikeza sici okuthiwa Uhambo, alinikela Okuhlangenwe ongakhetha kuzo ngesikhathi uhlala khona. Siyaqiniseka ukuthi ngeke kube eside kuze inikeza konke okudingeka ngesikhathi esisodwa, kodwa manje, okukhethwa banikela kukhona nakanjani kuwufanele ukulanda ke.
Uma uhamba kulo lonke elaseYurophu, kukhona ithuba elihle uzokhokhiswa okwenza indlela yakho ngesitimela. Izinto zokuhamba zomphakathi ongakhetha in Europe lalidume izixhumanisi unqamule izwe zabo, futhi ngenkathi izindiza kuyashesha, izitimela kukhona kuwusizo kakhudlwana, kujwayelekile kakhulu, futhi isevisi eziningi imizila eyengeziwe yomsebenzi. Esimweni lapho uku isidingo athenge amathikithi esitimela ngemali, ukulanda Londoloza Isitimela uhlelo lokusebenza ukwenza ukuthenga eshibhile futhi kulula.
Okuhambayo nabangani? Omkhulu! Enye yezindlela elula izinto ukuze uthole sezimiso kuyinto uma ungenawo uhlukanise travel izimali zakho ngendlela efanele. Gwema ukungqubuzana bese usebenzisa umakhalekhukhwini wakho kwizindleko kalula yokuhlukanisa phakathi abangane. Uma une iqembu, lokhu ingenye zokusebenza udinga ukuba thwebula ngaphambi kokuhamba. Splittr kuyinto ngqo abantu ojikelezayo. Faka izindleko ekuhambeni, okuhlanganisa nokuthi ubani ikhokhwe lokho kanye lokusebenza izokwenza okusele.
Uma isihambi sezinzwa, Enye yezinhlelo zokusebenza okudingeka uzilande ngaphambi kokuhamba yiCalm, uhlelo lokusebenza oluzokuba ngumngane wakho omkhulu. Leli thuluzi travel Ukugunda has imithwalo izizindlo ezahlukene sikhathazeke, self-opholile, ukuphefumula nokuningi. Iphinde izipesheli opholile imisindo ukukusiza uphumule. Ngenxa ecindezelekile isihambi ngokwami, Calm ukuba ngibheke yami, kahle, calm on the road.
Ukubhala kumagazini isindala esikoleni amangalisayo. Kodwa yini ephepheni kusho ukuthi ukusebenzisa ubungozi bokulahlekelwa ke, ikakhulukazi uma oyivakashelayo emazweni amaningi. Enye yezinhlelo zokusebenza ongayilanda ngaphambi kokuhambela i-livetrekker.com. Imizwa yohambo akho ukuze ukwazi ukubheka emuva ku uhambo lwakho i ibalazwe exhumana. Uhlelo lokusebenza amathrekhi njengoba uya, wokugubha umugqa obomvu kanye imephu umzila ngqo uthatha; uhlelo lokusebenza futhi uqaphe ijubane lakho kanye kokuwa, okwenza kube kakhulu adventure izihambi. Engeza izithombe, isiqophi, alalelwayo umbhalo endleleni, ukudala idayari multimedia travel ungaba! Mahhala, iOS and Android, livetrekker.com
TripIt kuyinto lokusebenza travel kokulandela esisiza uhlele yonke imininingwane yakho endaweni eyodwa. Kusukela indiza ukubhuka kodwa kwamahhotela, TripIt uhlela konke ibe i-lula ukufunda uhambo obenza nawe ku ithrekhi. Kuphakathi uhlanganise ama-akhawunti yakho ngqo uhlelo lokusebenza, noma okudlulisa zonke imeyili yakho yokuqinisekisa, futhi TripIt izokwenza okusele. Iyatholakala kwi-desktop, Android noma i-Apple iPhone, you’ll be able to use it anywhere in the world.
Uma ungenayo le app efonini yakho, yithole. Nakuba i-Nyakatfo Melika uye kakhulu aphuthelwe lokusebenza idatha ezisekelwe mobile, Whatsapp esetshenziswa emhlabeni wonke imiyalezo, amakholi wevidiyo uphinde izingcingo zezwi. ngenxa yokuthandwa kwayo kangangokuthi amabhizinisi kakhulu phesheya usebenza ngenombolo WhatsApp ngaphezu noma esikhundleni sanoma inombolo yefoni ejwayelekile. Trust us when we say you’ll need to download WhatsApp.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho? Chofoza lapha: http://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/apps-download-traveling/- (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)